. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: စာအိတ်လေးပေါ်က စာ ??
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/19/2012 11:47:00 PM
သီလ . . . ၁၀ပါးထိတိုင်အောင် တစ်ပါးထက် တစ်ပါး ပိုစောင့်ထိန်းရခက်တယ် . . ပြောတော့သာ လွယ်တယ် . . လုပ်ရ မလွယ် . . . ။
mood ပြန်ဝင်လာပြီလား .. :D
ပြန်ရေးပါ .. ပြန်ရေးပါ ..း))
5000 တန် ၁၀ ရွက်လောက်အနည်းဆုံးရှိတယ်ဆို.. ဘယ့်နှယ် ၁၀၀၀၀ပဲဖြစ်သွားတာလဲဟင်.. :P.. အင်း... အရာရာဟာ ကိုယ့်စိတ်ပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတာပါ...